TRUESTORY: သူရဲဝင်စီးခြင်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ ( ဒုတိယပိုင်း)
မြေဇင်းနည်းနှင့်တရားအားထုတ်တဲ့ကိစ္စ ခေါင်း ထဲဝင်လာ တယ်။ သူတို့နည်း မှာ ယောဂီတွေကို နတ်ပြည်၊ ငရဲပြည် သွားကြည့် ခိုင်းတယ် ဆိုတာ မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးအဲဒီယောဂီကသွားတာလဲဆိုတာ နောက်မှတပည့်တော်ကို စာပေနှင့် ကိုက်ပြပေး ပါအုံးဘုရား။
(၂) အဖြေ။ ။ ဘ၀င် စိတ်ကျတယ် ဆိုတာတော့ စဉ်းစား ရအုံးမယ် ကိုဝိ၊ ဘ၀င် စိတ်ကျနေ ချိန်မှာ လူ တစ် ယောက်ရဲ့ စိတ်ဟာ လုံးဝမသိနိုင်တော့ဘူးလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်၊ ပုံမှန်လန်း ဆန်းနေချိန်နဲ့ ဘ၀င်ဇောစိတ် လုံးဝမ ကျသေး ချိန်စပ်ကြား အခြေအနေ မှာ ဖြစ်နိုင်မယ် လို့ ခန့်မှန်းမိတယ်၊ စာစ ကားနဲ့ဆို ဟဒယ ၀တ္ထုရုပ်အား နည်းနေချိန်လို့ ဆိုရမလားပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘ၀င်စိတ် ကျသွားတယ် ဆိုရင် ဘာဆို ဘာမှ မသိနိုင် တော့ဘူး၊ အဲဒီဘ၀င်စိတ်မကျခင်လေးရှေ့ နား ဇော စိတ်လေးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မိ တယ်၊ အိပ်ငွေ့ချခံရသူ အခြေအနေကိုတော့ နားမလည် လို့ မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး၊
မြေဇင်းနည်းနဲ့ တရားအားထုတ်ပြီး နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည်ကိုသွားကြတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ စာပေနဲ့ ကိုက်ညီ နိုင်ပါ တယ်၊ သူတို့က ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီး စိတ်နဲ့လှည့်လည်နေတာ လို့ လူတွေက ထင်နေ ကြတာ၊ တကယ် ဆို စိတ်က အာရုံတစ်ခု( အထူးသဖြင့် ရူပါရုံတစ်မျိုးမျိုး)ကို လှမ်းညွတ် လိုက်တာလို့ ဆိုနိုင်တယ်၊ စိတ်ကရူ ပါရုံ ဆီကို သွားတာမဟုတ်ဘူး၊ လှမ်းပြီး အာရုံပြုလိုက် တာသက် သက်ပဲ၊ ဘုရားရဟန္တာများရဲ့ အဘိဥာဉ်တန်ခိုးနဲ့ လှမ်းကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ၊ ဒါပေမယ့် အာရုံမရှိပဲ စိတ် က ညွတ်ကိုင်းလို့ မရနိုင်ဘူး၊ တရား အားထုတ်နေ ချိန်မှာ စိတ်ကလဲသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေ၊ သမာဓိ ကလဲ အားကောင်းနေလေတော့ မြင်ချင် တယ် လို့ စိတ်က ညွတ်ကိုင်းလိုက်တာနဲ့ ပုံဖော်ပြီးမြင်ကြ ရတယ် ပေါ့။
ဒီနေရာ မှာ ပုံဖော် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သတိထားစေချင်တယ်၊ တစ်ချို့ယောဂီတွေ တာဝတိံသာက စူဠာမ ဏိ စေတီတော်ကို ဖူးရတယ် တဲ့၊ မြင်ဖူးတယ် ဆိုတဲ့ ယောဂီနှစ်ယောက်ကို တချိန်စီ မေး ကြည့်တော့ မြင်ရ တဲ့ အနေအထားချင်း မတူညီကြပြန်ဘူး၊ ဒါဟာ ရှေးက မမြင်ဖူးသေးတဲ့ အရာ တခုကို ပုံဖော်ကြည့်တယ်၊ စိတ်နဲ့ အာရုံပြုကြည့်တယ် လို့ ပြောရမယ်၊
ဦးနှောက် ထဲမှာ ရှေးက မှတ်သားထားတဲ့သညာသိ ဆိုတာ မရှိသေးလို့ပါ၊ ယခုခေတ်အခြေ အနေနဲ့ဆိုရင် ကွန်ပြူတာ တခုမှာ ဆော့ဝဲလ်အသစ်တခု install မမောင်းရသေးဘူး ဆိုရင် အစိမ်း သက်သက် မမှတ်မိသေး သလိုပေါ့၊ အဲ. မှတ်သားထားဖူးရင်တော့ တခုခုအလုပ်လုပ်တော့မယ် ဆို တာ နဲ့ ကွန်ပြူတာက သတိပေးတော့ တာပဲ။ သူမှတ်မိနေတယ် ဆိုတဲ့သဘောပဲ၊
သညာ သိ ဆိုတာလဲအတူတူပဲ၊ ဥပမာအနေနဲ့.. မွေးရာပါ မျက်စိကန်းနေသူတစ်ယောက်ဟာ ဆင် သတ္တ၀ါ ဆိုတာ မမြင်ဖူးသေးတော့ သူများပြောစကားနဲ့ ပုံဖော်ပြီးသာ သိနိုင်တယ်၊ ဆင်ကိုမြင်ဖူး သူကတော့ဆင်ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တာနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ဆင်ပုံစံကြီးပေါ်နေပြီ။ ဒါဟာ ဦးနှောက် နဲ့ ရှေးယခင်က သညာ သိအနေနဲ့ memorized လုပ်ထားခဲ့ဖူး လို့ ပေါ်နေ နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၃) မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တပည့်တော် အခုကြုံရတဲ့ တစ်ယောက် ကို မေးကြည့်တာ မှာတော့ သူက လုံးဝ Unconscious ဖြစ်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ sub conscious ပုံစံဖြစ်နေတာတွေ့ရ တယ်။ သူ့ကိုဝင် ပူးပြီး ပြောနေတာတွေကို အချို့ ကို သူသိနေတယ်။ နောက် သူ့ကို ၀င်စီးတဲ့သူနှင့် ပါလာတဲ့ တခြား သူတွေ ကိုပါ သူက မြင်နေရတယ်လို့ ပြောတယ်။ (အဲဒီအပေါ်မှာ တပည့်တော်က သံသယဖြစ်နေတယ်။)
(၃)အဖြေ။ ။ ဒါကလဲ ၀င်စီးမယ့် တစ္ဆေ သူရဲ ရဲ့ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်မှုနဲ့ ၀င်ပူးခံရမယ့်သူရဲ့ စိတ်ခံစား ချက် အခြေ အနေ ပေါ်မှာ မူတည် လိမ့်မယ်၊ ဥပမာအနေနဲ့. ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ movie တခု ကိုကြည့် နေတာ ချင်း အတူတူ တချို့က တကယ်ပဲ mood ၀င်ပြီး ခံစားနေလေတော့ တကယ်ထိတ် လန့်ကြောက် ရွံ့နေကြ တယ်၊ တစ်ချို့ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါ့း စားရင်းသောက်ရင်း ရယ်လိုက်မော လိုက်ကြည့်နေ နိုင်ကြ တယ်၊ အဲဒီသဘော အတိုင်း ၀င်စီးခံရမယ့်သူရဲ့ လက် ခံခြင်းစိတ် အခြေ အနေပေါ် မူတည်ပြီး Unconscious/ Subconscious နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်မယ် လို့ ထင်မိတယ်။
နောက် တချက် သူ့ကို ၀င်စီးတဲ့ သူနဲ့ပါ လာတဲ့ တခြား သူတွေကိုပါ သူကမြင်နေရတယ် ဆိုတာလဲ မိမိမေးဖူး သလောက် သူတို့လဲ မြင်ရပါတယ် တဲ့။ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နေခြင်း၊ စကား အပြန်အ လှန်ပြောခြင်း၊ ရုပ်ရည် ချောမောတာ၊ လှပတာ၊ ရုပ်ဆိုးတာ စတာတွေလဲ မြင်ရပါသတဲ့။
နံပါတ် (၄) မေးခွန်းမှာ body temperature က တပည့်တော် သူ့ကို ၀င်ပူးနေတဲ့အချိန်မှာ လက် ဖ၀ါးတွေ ကို ကိုင်ကြည့်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း နွေးနေတယ်ဘုရား။ မျက်လုံးတွေကိုတော့ ပူးနေစဉ် တစ်လျှောက်လုံးမှာ မှိတ်ထား တယ်။ (လက်တွေပုံမှန် အတိုင်းနွေးနေတာအပေါ်မှာ တပည့်တော် သံသယဖြစ်မိလို့ဘုရား)
(၄)အဖြေ။ ။ လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပြီဆိုရင် ဆေးပညာအရ အနည်းဆုံး(၂)နာရီ လောက်ကြာ မှခန္ဓာကိုယ်ကြီး တောင့်တင်းအေးစက်သွားတယ်လို့သိရတယ်၊၂နာရီ အတွင်းပျော့ပျောင်းနေ ဆဲ၊ နွေးနေဆဲမို့၊ ရေချိုး ပေးတာ၊ အ၀တ်အစား လဲလှယ်ပေးတာ လုပ်နိုင်ကြသေးတယ်၊ အချိန်ကြာ သွားတော့မှ တောင့်တင်း အေးစက်သွား တာ ထုံးစံပါ၊
ဗုဒ္ဓစာ ပေသဘော တရားအရ စုတိစိတ်ချုပ်တာနဲ့ကမ္မဇရုပ် လဲ ချုပ်သွားပြီ၊ သို့သော် အချိန် အတိုင်း အတာတ ခု အထိ အာဟာရဇရုပ်ေ တွ၊ ဥတုဇရုပ်တွေ မချုပ်သေးဘူး၊ အလုပ်လုပ်နေ သေးတယ်၊ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနွေးဓာတ် ရှိနေသေးတယ်၊ အဲ စောစောကလို ၂နာရီနောက်ပိုင်း ဆို ရင်တော့ ရုပ်အားလုံး သေဆုံးသွားတယ်၊ အေးစက်တောင့်တင်းသွားတယ်ပေါ့၊
အဲဒီတော့..အခုသူရဲဝင်စီးခံရသူမှာလက်ကအနွေးဓာတ်ရှိနေသေးတာမထူးဆန်းပါဘူး၊သူ့မှာအသက် လဲ မသေသေး ဘူး၊ စောစောက ရုပ်တွေအားလုံး ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေ သေးတယ်၊ စက္ကန့်ပိုင်းလေး အတွင်းနဲ့ အေး စက်နေ ရမယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ် နိုင်သေးဘူး လို့ ဆိုရပါမယ်၊ အဲဒီအတွက် သံသ ယဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။
နံပါတ် (၅) မေးခွန်းက တပည့်တော်ကြုံလိုက်ရတဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ ရေတောင်းသောက် သွား လို့ ဘုရား။ အဲဒါ မေးကြည့်တာ။
(၅)အဖြေ။အင်း..ဒါလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊တကယ်ဝဋ်ကြွေးပါလာတဲ့သူတွေကပါးစပ်ထဲ ရေတွေလောင်း ထည့်ပေး တာတောင် လုံး ၀ရေတွေ မ၀င်ပဲ ရေငတ်တဲ့ ဒဏ်ကို ခံကြရ တဲ့နာနာ ဘာဝတွေ ရှိခဲ့ကြ တာပဲ၊ ယခု လဲရှိ ဆဲ၊ နောင်လဲ ရှိနေကြအုံးမှာ၊ “ဘယ်သူ မပြု မိမိမှု” ပဲပေါ့။
နံပါတ် (၈) မေးခွန်းက တပည့်တော် အခုကြုံခဲ့တဲ့တစ်ယောက်က မ၀င်ခင်မှာ ထိုင်ရ့က်နေ အရှေ့ ကို မှောက်ချသွားပြီး ပြန်မတ်လာတဲ့အချိန်မှာဝင်သွားပြီ။ နောက်ပြန်ထွက်တော့ကျတေတစ်လျှောက် လုံး မျက် လုံး တွေမှိ တ်ပြီး ငိုနေရာကနေ မျက်လုံးတွေကို ပွတ်လိုက်ပြီး ဖွင့်လိုက်တော့ မူလ လူဖြစ် သွားတယ်။ အဲဒါကို လည်း သံသယ ၀င်မိတယ်။
(၈) အဖြေ။ ။ မိမိကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ လူလဲအတူတူပဲမို့ ဖြစ်နိုင်မှာပါ၊ အဲ.. တကယ် ၀င်ပူး တာလား မပူးဝင် ပါဘဲဟန်ဆောင်လုပ်နေ တာလား ဆိုတဲ့ သံသယ ကိုတော့ ကိုယ့် ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြည့် ပေတော့..
နံပါတ်(၉) မေးခွန်းမှာတပည့်တော်နှင့်တခြားလူတွေ ဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံးမှာကြက်သီး တောက်လျှောက် ထနေ တယ်ဘုရား။ အဲ တစ်ယောက် ကတော့ သူဘာမှ မဖြစ်ဘူး လို့ပြောတယ်။ နောက် သူက အခု ၀င်ပူး တဲ့ကိစ္စကိုလည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မယုံကြည် ဘူးလို့ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာ သတိထား မိလဲ ဆိုတော့ယုံတဲ့သူ တွေအကုန်လုံးက ကြက်သီး ထပြီး မယုံတဲ့သူက ဘာမှမဖြစ် ဘူးဆိုတာ ထူးခြားနေ တယ်။
(၉) အဖြေ။ ။ ကြက်သီး မွေးညှင်းထခြင်း၊ မထခြင်းကတော့ လူတိုင်း ဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် မရှိဘူး၊ အရင် အဖြေ မှာလဲ ပါပြီး သားပါ၊ မိမိလဲ အရင်ကသိပ်အယုံအကြည်မရှိခဲ့ ဘူး၊ကိုယ် တိုင် မကြုံတွေ့ခင်ကပေါ့၊ အဲ တကယ်ကြုံ ပြန်တော့လည်း မယုံသေး လို့လား၊(ဒါမှမဟုတ်)ကြောက် ရကောင်းမှန်းမသိလို့လား မပြော တတ်၊ ကြက်သီးမွေးညှင်း လုံးဝမထခဲ့ဘူး၊ အဲဒါက စိတ်ဓာတ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနဲ့ သက်ဆိုင်လိမ့်မယ်၊
သာဓက အနေနဲ့ ကြည့်လေ. ငါးရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရုပ်ဆိုးဆိုး ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း ဘီလူသူရဲကြီးတွေကို မြင်ရတော့ သာမာန်လူတွေ က ကြောက် လန့်ထွက်ပြေးကြ ပေမယ့် ဘုရားအလောင်းတော်တို့ကျတော့ သူသေကိုယ်သေ ချသင့်ရင် ချမယ် ဆိုပြီး တိုက်ခဲ့တာပဲ၊ ဒါဆို သူက ဘုရားအလောင်းတော်မို့လို့ပါ လို့ ဆင်ခြေပေးစရာရှိတယ်၊ တ ကယ်တော့သူလဲ အဲဒီအချိန်က သာ မာန် ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ဦးပဲ ရှိသေးတာပါ၊ ဒါပေမယ့်လုံးဝ ကြက်သီးမွေးညှင်းမထခဲ့ဘူး၊မကြောက်ရွံ့ခဲ့ဘူး၊လူချင်းတူသော်လည်းရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်း၊ ကြောက်စိတ်ဓာတ်ခံအားနည်းခြင်း၊ မနည်းခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင် ပါလိမ့်မယ်။
တပည့်တော် မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာ ပြန်ပြီး ဖြေကြားပေးတာကို ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ် ဘုရား။ ဒီလောက်ဆို တပည့်တော် ပို့စ်ရေးရဲပါပြီ။ပထမရေးဖို့ကို တော်ကြာ မဖြစ်နိုင်တာကြီးရေးတယ်လို့ ပြောကြ မှာ စိုးလို့ဘုရား။အခုလောက် ဆို ရေးဖို့ အတွက် အထောက်အထားတော်တော်လေး ခိုင်လုံသွား ပါပြီ ဘုရား။
တပည့်တော် ရေးပြီး tag လိုက်ပါ့မယ်ဘုရား။
စာကြွင်း။ ။ ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်စပ်ဖ တ်ရှုမှသာ အဖြေ အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ် ကာ ပြည့်ပြည့် စုံစုံ နားလည် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမပိုင်းအမေးအဖြေများကိုဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအမေး အဖြေများ အပြီးမှာတော့ ကိုဝိဆီက “ကူညီပေး ပါလို့ ဆို လာကြ သူများ” ဆိုတဲ့ သူရဲ တစ္ဆေ ၀င်ပူးခံ ရပြီး ကျွတ် ချင်လို့ အကူ အညီတောင်း တာကို ကြုံခဲ့ ရတဲ့ တိုကျိုမြို့က ဂျပန်လူ မျိုး မိသားစုတစ်စုရဲ့ နှစ်ပေါင်းငါး ဆယ်ကျော် ကာလပတ်လုံး နာနာဘာ ၀ပရလောက သားအဖြစ် ကျင် လည် ခဲ့ရသည် များကို ရေးသား ထားသော၊ ထေရ ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာရ ဟန်း သံဃာများ နှင့် မဟာ ယာန ဂျပန် ဘုန်းကြီးတို့၏ ဘုန်းကံ ပါရမီချင်း၊ အရည် အချင်း အကျင့်စာ ရိတ္တ၊ သီလ သမာ ဓိ၊ ပညာ ဂုဏ်တို့ ကွာခြားကြပုံ၊ ပရလောက ၀ိဥာဉ်သား တို့ အတွက်မည်မျှ အထိ အကျိုးကျေး ဇူးခံ စား ရပုံတို့ကိုကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်အဖြစ် ဖော်ပြ ထားသော ဆောင်းပါးကောင်းလေး တပုဒ်ပေါ် ထွက်လာတယ်၊
တစ်ခုခု လုပ်မယ် ဆိုတိုင်း အရာရာမှာ စေ့စပ်သေချာစွာတွေးခေါ်တတ်တဲ့ သူ့စိတ်ကူးလေး များကို နမူနာ ယူစရာ များ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်မိပါတယ်၊ အခုလို စေ့စေ့စပ်စပ် တွေးခေါ်ပြီး စာရေးသူ ကို မေးခဲ့လို့လဲ ပြည့်စုံ တဲ့ ဒီလိုအဖြေမျိုးကို ဖြေဖြစ် သွားတာပါ၊ မေးတတ်တဲ့ကိုဝိကို ဒီနေရာ ကနေ ကျေးဇူး တင်စကား ပြောကြား လိုက် ပါတယ်။
"ကူညီ ပေးပါလို့ ဆိုလာကြသူများ” ဆောင်းပါးကို ဒီနေရာလေးမှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ကိုဝိမု တ္တိသုခ( တိုကျို) မေး၍ အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A(ပန်းကမ္ဘာ) ဖြေကြားသည်။
Copy and Credit to စိတ်ကူးပျော်ရာ
Posted by TRUE STORY at 11:14 AM